राजनीति – Page2– Karnalitimes
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले अब भोलि विश्वासको मत लिने
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अब भोलि मात्र विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज तोकिएको प्रदेश सभापको वैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदमा उपस्थिति नभएपछि आजको वैठक कार्यसूची प्रवेश गरी स्थगित गरिएको हो। भोलि १ बजेका लागि वैठक तोकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसहितका सांसदहरु एम
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले आज विश्वाको मत लिँदै, संसदमा एमाले उपस्थित हुन नसक्ने
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आज विश्वासको मत लिन लागेका छन्। कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभावको वैठक तोकिएको छ। यसका लागि मंसिर ३ गते प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तोएिको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमा
सुर्खेतमा संस्थापन पक्षको प्यानल नै विजयी
काँग्रेस सुर्खेत अधिवेशनः सुर्खेत। नेपाली काँग्रेसको सुर्खेत जिल्ला कार्यसमितिमा संस्थापन पक्षको प्यानल नै विजयी भएको छ। आइतबार भएको निर्वाचनबाट प्यानल विजयी भएको हो। आइतबार उपसभापति भन्दा मुनिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि निर्वाचन भएको थियो। सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन गर्नुपरेन। सभापतिमा शनिवार नै खड्क पोखरेल निर्विरोध भईसकेका छन्। संस्थानइतर समूहबाट सभाप
पूर्णबहादुर खड्काको एक्सन कि रिएक्सन?
टिप्पणी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कामाथि लाग्ने एउटा आरोप थियो– उनी केन्द्रमा सफल राजनीतिज्ञको रुपमा स्थापित भए पनि जिल्लामा असफल भए। हुन पनि चाहेर होस् वा नचाहेर, उनले जिल्लाको कांग्रेस राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाउन सकेका थिएनन्। उनको आफ्नो संघीय निर्वाचन क्षेत्र (पूर्वी सुर्खेत) मा भने उनको एकछत्र पकड रह्यो। जिल्लाको कांग्रेस सत्तालाई लामो समय नेता हृदयराम थानीले चलाए। उनी जिल्ला तहमा
नेपाली कांग्रेसको सुर्खेत जिल्ला सभापति बनेका पोखरेल को हुन् ? यस्तो छ- उनको राजनीतिक यात्रा
सुर्खेत। नेपाली काँग्रेसको १४ औं अधिवेशनबाट खड्क पोखरेल सुर्खेत जिल्लाको सभापति बनेका छन्। शनिवार सभापतिमा उम्मेदवारी दिन तोकिएको समयभित्र पोखरेलको एकल उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध सभापतिमा चयन भएका हुन्। उनी संस्थापन पक्षबाट सभापति बनेका हुन्। संस्थापन समूहबाट सभापतिका अरु आकांक्षीहरुसँग छलफल गरी पोखरेललाई सभापति बनाईएको हो। संस्थापनइतर समूहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएपछि सभापतिका उम्मेदवार
नेपाली काँग्रेस सुर्खेतको सभापतिमा पोखरेल
सुर्खेत। नेपाली काँग्रेस सुर्खेतको सभापतिमा खड्क पोखरेल निर्विरोध चयन भएका छन्। उम्मेदवारी दिन तोकिएको समयभित्र उनको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध सभापति चयन भएका हुन्। संस्थापनइतर समूहबाट भने महाधिवेशन प्रतिनिधि नै थिएनन्। संस्थापन पक्षबाट सभापतिका आकांक्षी धेरै भएपनि मिलाएर पोखरेललाई सभापति बनाईएको हो। सभापति भन्दा तलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको लागि भने आज मतदान भईरहेको छ। सुर्खेत जिल्ला क
सुर्खेत–१ मा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आज फेरि मतदान हुँदै
काँग्रेस अधिवेशनः सुर्खेत। नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधि सभा सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र १ मा दलित प्रतिनिधिका लागि आज पुनः मतदान हुँदैछ। दलित कोटाबाट दुईजना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुपर्नेमा एकजना मात्र आएकाले आज पुनः मतदान गर्न लागिएको हो। मंगलबार भएको प्रतिनिधि सभा सुर्खेत–१ को निर्वाचनबाट एकजना मात्र दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका थिए। निर्वाचन समितिको गल्तिका कारण यस्तो भएको सुर्खेत–१ का क्षेत
सुर्खेत कांग्रेसमा कसको दावेदारी कति बलियो?
नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचनमा सुर्खेतमा पौडेल समूह ‘क्लिन स्वीप’ भएको छ । प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि क्षेत्रीय सभापतिसहित १ सय २५ जना चुनिँदा पौडेल समूहको अवस्था शून्य रह्यो । कांग्रेसको विधानअनुसार एकभन्दा बढी संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला सभापति लड्नको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्नु अनिवार्य हुन्छ । यस हिसाबले पौडेल पक्षबाट जि
समाजवादीको पक्षमा उत्साहपूर्ण समर्थन छ : अध्यक्ष नेपाल
सुर्खेत। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी नयाँ क्रान्तिका साथ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनतर्फ लाग्ने बताएका छन्। पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत आएका नेपालले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा पुराना विकृति, विसंगतिलाई हटाएर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्। कम्युनिष्ट पार्टी
माधवकुमार नेपाल आज सुर्खेत आउँदै, प्रदेश कमिटी वैठक र कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुने
सुर्खेत। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आज सुर्खेत आउन लागेका छन्। आज बस्ने कर्णाली प्रदेश कमिटीको प्रथम वैठक र भोली हुने अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सुर्खेत आउन लागेका हुन्। नेकपा (एस)का केन्द्रीय सदस्य देवी वलीका अनुसार उनी जहाजमार्फत नेपालगञ्ज विमानस्थल आएर सुर्खेत आउनेछन्।* यसअघि सुर्खेत आउने बुद्ध एअरको जहाजमार्फत आउने तय भएपनि प्रतिकुल मौसमका कारण सु